Casharka Fiidiyowga: Saamaynta Labad Jeer ee Adobe Photoshop | Abuurista khadka tooska ah
Casharka Fiidiyowga: Saamaynta Laba-Laabashada ee Adobe Photoshop
Qodobka fiidiyowga ee maanta waxaan ku arki doonnaa saameyn aad u fudud. Sixirka saameyntani runti been uma sheegayo foomkiisa, laakiin wuxuu ku jiraa waxa ku jira. Tani waa soo-gaadhista laba-jibbaaran ee Adobe Photoshop. Wax aad u macquul ah oo fudud oo na siiya fursado badan oo aan la koobi karayn oo taasna sababtaas awgeed waxay u baahan tahay shaqo fikradeed oo dheeri ah. Waa loolan iyo qaacido wanaagsan in la helo dhul-gariir iyo natiijo xoog leh. Miyaad ku dhiiran kartaa inaad sameyso soo-jeedin laba-jibaaris ah?
Tallaabooyinka aan ku socon doonno casharkeena fiidiyowga ayaa ah kuwa soo socda. Ha moogaan cuntadayada!
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno waa inaan raadino sawiradeena. Hubso in midka aan u adeegsan doonno sida caaryada (kiiskan kan shakhsiyadeena) uu leeyahay kala duwanaansho iftiin weyn. In ay jirto meel si dhammaystiran u qariyay hooska iyo mid kale oo iftiin leh. Waxa ugu fiican ayaa noqon kara in lala shaqeeyo sawirro leh a asal isku mid ah iyo caddaan. Dhinaca kale, iska hubi in sawirka aad ku dhex-dari doontid silhouette uu yahay sawir leh qaabab oo aad u firfircoon: Magaalo ay ka buuxaan dhismayaal dhaadheer, geed laamo ka buuxo, qarax ...
Tallaabada xigta waxay noqon doontaa quusi ​​labada sawir oo ku ciyaar qalabka loo yaqaan 'dodge and dodge'. Ujeeddadu waa in la xoojiyo kala duwanaanshaha muuqaalkeenna guud si loo helo isdhexgal ballaaran.
Tallaabada xigta waxay noqon doontaa inaan soo dhoofino sawir, oo aan dooneyno inaan ku dhexgalno tilmaamaha astaamaheenna. Si toos ah ayaan kuu siin doonaa a qaabka isku dhafka ah ee rasta ama khafiifinta.
Waxaan u isticmaali doonaa qalabka quudhsado oo si xad dhaaf ah u sii daa mar labaad haddii loo baahdo iyo waliba tirtiraha.
Waxaan horeyba u helnay natiijo dhulgariir ah!
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Casharka Fiidiyowga: Saamaynta Laba-Laabashada ee Adobe Photoshop
Giovanny Pérez (@ amiir4) dijo
Wanaagsan, Waad ku mahadsantahay wadaagistaada.
Jawaab Giovanny Pérez (@ Ch4RLY_502)
Waad soo dhawaynaysaa Giovanny, waan ku faraxsanahay inaad faa'iido u aragtay. Dhamaan wanaag.
Paperwolf: Abuur farshaxan warqad aad u hal abuur leh
25 shey oo loogu talagalay Wordpress 2015